Madaxweyne Xasan sheikh oo tegaya Kismaayo ka hor furitaanka shirka dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka – Radio Daljir
Madaxweyne Xasan sheikh oo tegaya Kismaayo ka hor furitaanka shirka dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka
Oktoobar 28, 2013 4:42 b 0
Kismaayo, October 28, 2013 – Madaxweynaha Soomaaliya xasan sheikh Maxamuud ayaa la filayaa in uu booqasho ku tago magaalada Kismaayo ee xaruunta Jubbada Hoose, xili loo diyaar garoobayo shirka dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka ee ka furmaya Muqdisho.
Magaalada Kismaayo ee xaruunta u ah maamulka Jubba ayaa laga dareemayaa diyaar garow xoog leh oo loogu jiro soo dhowaynta madaxweynaha dalka, in kastoo aan ilaa hadda la ogayn xiliga rasmi ahaan uu madaxweynuhu u tegayo Kismaayo.
Saldhiga degmada Kismaayo ayaa shalay lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo qayb ka ah diyaar garowga, sidoo kale waxaa magaalada lagu dhejiyey sawirrada madaxweynaha dalka.
Docda kale magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya oo uu ka furmayo shirka dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka 2 november, waxaa gaaray wefdi horudhac ah oo ka socda maamulka Jubba, kuwaas oo u gogol xaaraya madaxda Jubba uga qayb gelaya shirka.
Col. Barre Hiiraale ayaa isna la filayaa in uu soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimada dalka si uu qayb uga noqdo shirka arrimaha Jubbooyinka ee ay dowladdu qabanayso.
Puntland oo shirkada Hamza Foundation u ogolaatay in ay ka kalluumaysto xeebaha gobolka (Maqal)